fella, Author at Super Union
လတ်တလောတွေ တပ်ဘက်မှ အထိနာလျက်ရှိသော MyTel တာဝါတိုင်များအား၊ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးသူတွေကို ၊ ဖမ်းမိခဲ့ရင် သေဒဏ်မှတပါး အခြားမရှိဘူးလို့ဇော်မဲလုံးပြော MyTel တာဝါတိုင်တွေကို PDF တွေ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးနေကြခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်ခြင်းမြောက်တဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီက ဖမ်းမိခဲ့ရင်သေဒဏ်မှတပါး အခြားမရှိဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက …
ယနေ့ ဂန့်ဂေါ ပစ်ခတ်မှုမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ းအထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေအတွက် တာဝန်ကျေကြောင်း မျက်ရည်နဲ့ရေးတဲ့ဆရာမလေးရေးတဲ့စာ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မနက်ပိုင်းက ဂန့်ဂေါ ပစ်ခတ်မှုမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ ဆရာမလေး ရဲ့ ရင်ဖွင့်ရေးသား …
မြန်မာလို ဖွဲ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာရေးသမားတွေ ဘာကြောင့် နေရာရနေကြတာလဲ…… ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာရေးသမားတွေ သိပ်ပြီးနေရာမရကြဘူး။ ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝမှာ ဆုံခဲ့သမျှဧည့်သည်အတော်များများ ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့သူ ရှားတယ်။ တစ်နှစ်ကို တစ်ခေါက်တောင် မရောက်ကြတော့ဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမယ်ဆိုတာကို သူတို့က တကယ်သိသွားပြီးတဲ့နောက် ဘယ်ဘုရားကိုမှ …
အချို့သော ဘုန်းကြီးတွေဟာ ( အားလုံးကိုမဆိုလို ) ဒီမိုကရေစီရရှိသွားမှာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပဲ အဘယ်ကြောင့် နေချင်ကြတာလဲ …? ၁။ ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်သွားရင် လူတွေက အသိဉာဏ် ပညာပိုပြီး မြင့်လာမယ်။ အမြင်တွေ ပိုကျယ်လာမယ်။ …
ပညာမဲ့တွေ အာဏာရူးတွေကြောင့် ဘဏ်ထဲကပိုက်ဆံတွေအလိုလိုနေရင်း စက္ကူစုတ်နီးပါးတန်ဖိုးဖြစ်တော့မည်..ဘာကြောင့်လဲ………….. ပြည်တွင်းစီးပွားရေးစျေးကွက်တွင် စက်တင် ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီစျေးကွက်ပေါက်စျေးအရ အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၁၈၄၅၀၀၀ စျေးပေါက်နေပြီး ရွှေဝယ်ယူသူများ ပြားလွန်း၍ ရက်ချိန်း ပေးဝယ်ယူနေရကြောင်း …
NYG အစုိး၏ ခုခံတြန္းလွန္စစ္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ သေဘာထား NUG အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ခုခံတြန္းလွန္စစ္ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေပၚ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕က နိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး …
မင်းအောင်လိုင် တို့ စခတပ်ကို ချောင်ပိတ်ရိုက်လိုက်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့နောက်ထပ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုကြီးတခု…. နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်များ၏ တွန်းလှန် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန် လာနေသော်လည်း တရုတ်အစိုး ရသည် စစ်ကောင်စီ အသာရမည့် ဖက်မှ လောင်းကြေးထပ်လျှက် …
ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဈာပနမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူတင်(ဗီဒီယိုဖိုင်) ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာ အင်္ဂါနေ့က သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ကြီး Yevgeny Zinichev ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ ရုရှားမီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၅ …
ေခါင္းကို ေသနတ္ဒင္နဲ႔ လႊဲရိုက္ခံရတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့လူနာတင္ကားေမာင္းလို႔တဲ့။အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို႔သတ္ခံရတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကင္းေစာင့္လို႔တဲ့။…………. ေခါင္းတည့္တည့္ကို ခ်ိန္ၿပီး ပစ္သတ္ခံရတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔နားက ပုံရက္လဲက်သြားတဲ့ လူနာတစ္ေယာက္ကို ကယ္ဖို႔လုပ္လို႔တဲ့။ ကေလးသုံးေယာက္အေမ ေခါင္းတည့္တည့္ပဲ အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံရတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေျပးလာတဲ့လူေတြကို ဖြက္ထားၿပီး မလုပ္ၾကပါနဲ႔ …
ဖီဖီကြီးဒေါပွပြီလေ 😅😅😅အောက်ခြေ စစ်သား တွေရဲ့ အသက်ထက် သူ့သားလေးပိုင်ဆိုင်တာကိုထိလို့ အစွမ်းကုန် ယုတ်မာ သတ်ဖြတ်ပြပါတော့မည် Mytel တိုင်တွေ ဗုံးခွဲခံရတော့ဒေါသတကြီး နဲ့ မိုင်တဲက သက်မဲ့တွေသတ္တိရှိရင် ငါတို့ စစ်တပ်ကို လာတိုက်တဲ့လားငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနှဲစာ …